Ardeygii garaacay albaabkii qaldanaa ee la dilay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaArdeygii garaacay albaabkii qaldanaa ee la dilay
Ardeygii garaacay albaabkii qaldanaa ee la dilay
Bishii October 1992, Yoshihiro Hattori wuxuu garaacay albaab qaldan.
Yoshi, wuxuu ahaa 16-sano-jir u dhashay Japan, waxaana lagu dilay Mareykanka.
Wuxuu ku sii socday xaflad ka dheceysay Baton Rouge oo ka tirsan gobolka Louisiana. Wuxuu la socday saaxiibkiisa oo lagu magacaabo Webb, waxayna garan waayeen gurigii ay u socdeen.
“Ma garanaynin qeybtaas magaalada ka mid ah, waxaana u maleynayaa in jidad qaldan aan maray,” ayuu yiri Webb oo dhowaan wareysi bixiyay.
Labada ardey waxay xirteen dharka dadka lagu cabsiiyo, iyagoo u haysta in meeshii saxda ahayd ay joogan. Balse waxay sameeyeen qalad aan ula kac ahayn kaas oo galaaftay noloshii Yoshi.
Baahin aad u ballaaran oo saxaafaddu sameysay ayaa markii dambe sababay olole lagu dalbanayay in isbedel lagu sameeyo xeerka hubka ee Mareykanka.
27 sano ka dib, waalidiinta Yoshi, qoyskii uu la noolaa ee Mareykanka iyo qareenkiisii Louisiana waxay xasuusteen maalinta noloshoodu ay wax badan iska badaleen.
Yoshi wuxuu “aad u jeclaa ciyarah rugby-ga” sida ay sheegeen waalidiintiisa oo kala ah Masa iyo Mieko Hattori, oo Email lagu wareystay. “Markii hore ma uusan dooneyn in Mareykanka uu aado.”
Wuxuu is bedelay markii Yoshi uu ku guuleystay imtaxanka Adeegga Goobta ee Mareykanka (AFS) -kaas oo ah is dhaafsiga ardeyda ee caalamka oo dhan. “Si weyn ayuu ugu farxay”, sida ay waalidkiisu tilmaameen.
Yoshi wuxuu gudbiyay warqadiisii codsig. “Meel kasta oo an aado, waxaan doonayaa in aan ka dhigto dalkeyga labaad,” ayuu ku qoray.
“Qoysaska na marti geliya waxaan u karin karaa cuntada Japan, waxaan barayaa qaabka ay u nool yihiin dadka Japan”.
Xagaagii sannadkii 1992-dii, Yoshi wuxuu u safray Mareykanka oo uu qorsheynayay inuu sannad ku noolaado. Qoyska soo dhoweeyay wuxuu kula kulmay Dallas. Waxayna geeyeen gurigooda, Baton Rouge.
Dr Holley Haymaker, waxay ahayd dhaqtar, seygeeda Dick Haymaker, wuxuu ahaa khabiir arrimaha fiisigiska, waxayna horey u marti-geliyeen ardey kale oo dunida ka kala timid. Balse Hattori wuxuu noqday qof si degdeg ah u soo jiita dadka kale oo fikrad fog lahaa, sida ay sheegeen.
Qoyska Haymakers wiilkooda Webb oo xilligaa ahaa 16 sano jir wuxuu sheegay in Yoshi “uu aad u jeclaa in nolosha uu wax badan ka barto” iyo inuu saaxiibbo ku yeesho meelkasta ee uu tago.
Labada wiil waxay bishii September ee 1992-dii, ka qeyb galeen Munaasabad, wuxuuna Yoshi halkaas ka soo bartay ardey kale oo Japan u dhalatay oo Mareykanka ku joogay waxbarasho tiisa la mid ah.
Laba isbuuc ka dib, waxaa lagu casuumay munaasabadda Halloween-ka loo garanayo oo ka dheceysay Dhanka Waqooyiga Bari ee Baton Rouge, ee bartamaha magaalada.
‘Waxaan halkan u joognay xafladda’
Maalin Axad ah, 17-kii October, Dick iyo Holley waxay aadeen shineemo halka Yoshi iyo Webb ay u dhaqaaqeen dhanka xafladda. Yoshi wuxuu u lebistay sida jilaaga caanka ah ee John Travolta – wuxuu aad u daawan jiray aflaanta John Travolta, ayuu yiri Webb.
Webb wuxuu u lebistay sida qof shil galay – wuxuu xirtay qalabka loo xiro dadka qoorta ka jabay, wuxuuna sidoo kale isku duubay faashado.
Waxay qorsheysteen in ay raadiyaan gurigii ay u socdeen. “Ugu dambeyn waxaan garnay waddadan. Waxaan aragnay gurigan – Waxaa lagu sharaxay astaamaha xafladda Halloween-ka, seddax gaarina way hor tagnaayeen.
Lambarka gurigaas wuxuu ahaa 10311, iyagana waxay u socdeen 10131. Aniga waxaan arkay cinwaankan waxaanna ku dhahay “Oh waakan guriga!”
Webb iyo Yoshi albaabka ayey garaaceen, cidna umaysan jawaabin. ka dib waxa aragtay haweeney ku jirtay qeybta garaashka guriga, wey eegtay waxayna isla markiiba ka naxday wejigooda.
“Waxaan u soconay sida dad jahawareeray, dhismaha daaraddiisa ayaan ku socday anigoo ka fakaraya in guri kale aan ku dhex jirno,” ayuu yiri Webb.
“Ka dib qof ayaa albaabka furay – Rodney Peairs ayaa furay albaabka.”
Rodney Peairs, wuxuu ahaa 30-sano jir ka shaqeeyay suuq hilibka lagu iibiyo, wuxuuna gacanta ku haystay qoriga loo garanayo .44 Magnum revolver. Yoshi ayaana dhankii ninkaas u dhaqaaqay.
“Wuxuu si weyn u xiiseynayay in uu xafladda ka qeybgalo, mana fahamsanayn in [Peairs] uu qori haystay. Waxaa suuragal ah in uu mooday in arrin halloween ay tahay,” sida uu sheegay Webb.
“Lugaha ayuu ka ciyaarayay, wuuna heesayay, si cod dheer ah, ‘waxaan halkan u joogna xafladda! waxaan u nimid xafladda!’ – si farxad ka muuqato.”
Peairs wuxuu ku qeyliyay “istaag!” balse Yoshi wuxuu u muuqday in uusan fahmin, wuuna sii socday. Peairs hal xabo ayuu riday, waxayna xabadka uga dhacday Yoshi, wuxuuna xirtay iridda.
‘Waxay ahayd dhacdo argagax leh’
Dhanka kale ee magaalada, waalidka qoyska Haymakers waxay ka soo baxayeen shaneemada ka dib markii ay soo daawadeen filimka. “Waxaan ku dhahay Dick, markii aan shineemada ka soo baxnay ‘Waa arrin fiican in dalkan uusan sidii hore u rabsho badneyn’,” Holley ayaa hadalkas xasuusatay.
Markii ay bannaanka u soo bexeen, waxaa u soo dhacay telefoonka. Waa booliska. Askerigii qadka ku jiray wuxuu u sheegay in Webb uu fiican yahay, balse Yoshi in ay wax gareen – isagoo ku qarqaraya magaca.
Holley waxay tiri ‘aan ku kulanno cisbitalka. “Taas muhiim ma ahan,” ayuu askeriga ku jawaabay.
Dick iyo Holley waxay u dhaqaaqeen dhanka saldhigga boolis ee Webb uu joogay. Keligii ayaa fadhiyay mana ogeyn waxa ku dhacay saaxiibkii, ka dib markii ambalaasta ay dhaqaaqday. Waalidkiisa ayaa warka u sheegay.
“Ereyadii ugu horreeyay ee afkiisa ka soo baxay waxay ahayeen, ‘hooyadiisii miskiinta ahayd’,” ayuu yiri Dick. “Taas waxay bilow u ahayd sheekada oo dhan ee burburisay noloshii Hattoris.”
Waalidiinta Yoshi waxay arrinta ka maqleen qof soo wacay oo ka tirsan hay’addii wiilkooda usoo dirtay Mareykanka. Hooyadii Mieko, waxay dib ugu noqotay qolkii wiilkeeda uu ku koray, wayna ku oysay.
‘Mid ka mid ah deriskaaga’
Laba maalmood ka dib dilka, qoyskii Hattoris waxay u duuleen New Orleans. “Waan argagaxay,” ayey tiri Holley. “Waxay ahayd in aan xananeeyo canugooda, waana la dilay.”
Balse qoyska hal walwal ayay qabeen. “Ereyadii ugu horreyay ee Yoshi hooyadii ay tiri waxay ahayeen, ‘siduu yahay Webb?'”
Dilkii Yoshi wuxuu noqday war caalami ah. Wuxuu ruxay shacabka Japan halkaas oo aan laga ogoleyn hubka. Masa iyo Mieko waxay qaadeen tallaabo degdeg ah, waxayna billaabeen olole ay ka dhex sameeyeen Japan iyagoo dalbanayay in hubka sida fudud lagu helo ee Mareykanka la joojiyo.
“Waxaan bilownay ololaha arrinta uu nagu dhaliyay,” ayey yiraahdeen. “Mieko waxay warqadda ololaha qortay iyadoo saaran diyaaraddii ka qaaday Louisiana ee ku sii waday Japan.”
Dhanka Baton Rouge, dacweynta Rodney Peairs waxay noqotay golihii warbahinta. Booliska way sii daayeen markii hore isagoo aan la dacweyn, waxayna u qaateen inuu xuquuq u lahaa in gurigiisa dhexdiida qofkii soo gala uu toogan karo.
Balse, ka dib cabasho ka timid Maayarkii Louisiana, iyo qunsuliyadda Japan ee New Orleans, waxaa lagu oogay dacwad la xiriirtay dil ula kac ah.
Qareennadiisii si adag ayey u shaqeeyeen iyagoo ficilkiisa ku tilmaamay is difaacid. Waxay sheegeen in Peairs uusan ahayn “dilaa”. Si fudud, wuxuu la mid yahay ‘mid ka mid ah deriskaaga’ kaas oo ka falceliyay dhaqankii “aadka u ba’naa iyo dhaqaaqii” Yoshi.
Dhanka kale, Bonnie Peairs – Xaaska Rodney, tas oo markii hore furtay albaabka – waxay maxkamadda u sheegtay in Yoshi uu ka nixiyay, ayna seygeeda ku amrtay “inuu qoriga soo qaato”.
kooxdii difaaceysay way shaqeeyeen. Bishii May 1993-dii, Rodney Peairs waa la sii daayay ka dib xeer beegti kiiska u fadhiday, seddax saacadood.
Masa Hattori wuxuu ka qeybgalay dhageysiga dacwadda, isagoo dhageysanayay sharaxaadaha laga bixinayay wiilkiisa “oo aan xakameyn lahayn… firfircooniga xad-dhaafka ah ee dadka Japan ee is dhaafsiga ardeyda kaas oo is moodsiiyay in shaqadiisu tahay ka cabsiinta dadka kale”.
Balse isaga iyo xaaskiisa lagama niyad jebin ololohoodii la xiriiray xakameynta hubka.
“Waxay nala tahay in Peairs xita uu ka mid yahay dhibanayaasha Mareykanka,” ayey yiraahdeen Masa iyo Mieko. “In Rodney Peairs la sii daayo ma ahayn arrin la xiriirtay ololeheena.”
Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Dhoofay Muqdisho, Dalka Uu Ku Sii Jeedo Iyo Madaxweynaha Uu La Kulmi Doono